I-FES yethule i-Indian Observatory eGeoSmart India - Geofumadas
I-FES yethule i-India Observatory eGeoSmart India
Disemba, 2019 Geospatial - GIS, Innovations
(LR) U-Lieutenant General Girish Kumar, Umhloli Omkhulu Wase India, Usha Thorat, uSihlalo weBhodi Yababusi, i-FES kanye nalowo owayeyiPhini Lombusi Webhange Lombuso waseNdiya, uDorine Burmanje, Umongameli Wokulawulwa Komhlaba, Umqondisi Wezolwazi Lomhlaba I-United Nations (UN-GGIM) neJagdeesh Rao, i-CEO, i-FES, ngesikhathi kwethulwa i-Indian Observatory engqungqutheleni yeGeoSmart India e-Hyderabad ngoLwesibili.
Vula ipulatifomu yedatha yokulondolozwa kwemvelo, yokuqalisa ukuthuthukiswa komphakathi
Isisekelo Sokuphepha Kwemvelo (i-FES), i-NGO esebenza ngokulondolozwa kwemithombo yamahlathi, umhlaba kanye namanzi ezisekelweni, yethule uhlelo lwayo oluvulekile lwedatha olubizwa ngokuthi i-Observatory of India ngosuku lokuqala lwengqungquthela yeGeoSmart India, ingqungquthela. usuku lwakusasa
U-Lt Girish Kumar, Umhloli Omkhulu Wezwe waseNdiya, Usha Thorat, uSihlalo weBhodi Yababusi, i-FES kanye nalowo owayeyiPhini Lombusi Webhange Lombuso waseNdiya, uDorine Burmanje, Umongameli Wenhlangano Yezokuphatha Ulwazi Lwezwe Lonke Lezizwe (i-UN) -GGIM) abekhona kulo mcimbi.
I-Observatory of India ibutha imingcele yedatha engaphezu kwe-1,600 kumapharamitha wokuhlalisana, ezomnotho nezemvelo endaweni eyodwa. Itholakala ngokukhululekile ezinhlanganweni zomphakathi, abafundi, iminyango kaHulumeni kanye nezakhamizi, futhi ifaka amathuluzi wezobuchwepheshe ayi-11 asiza ukuqonda isimo futhi ahlele izindlela zokungenela ukulondolozwa kwamahlathi, ukuvuselela izinsiza zamanzi kanye nokwenza ngcono izimpilo zomphakathi. .
Lawa mathuluzi angasebenza ngokungaxhunyiwe ku-Smartphones futhi atholakala ngezilimi zasendaweni ezilula ukuhumusha amakhodi futhi angasetshenziswa ngisho nakubantu abanemibhalo ephansi. Isibonelo, i-Composite Landscape Assessment and Regency Tool, noma i-CLART, isiza ukukhomba izindawo ezingcono kakhulu zokuphinda zakhiwe ngaphansi komhlaba ngaphansi kohlelo lwe-MGNREGA. I-GEET, noma i-GIS Right Tracking System, idala ukuqwashiswa ngamalungelo emiphakathi ebekelwe ubandlululo ngokubheka ukufaneleka kwamakhaya. Ngokufanayo, i-Toolbox ehlangene ye-Forest Management, noma i-IFMT, iqukethe amathuluzi asiza ukuqoqwa kwedatha nokuhlaziywa futhi asize iminyango yamahlathi ukuthi ilungiselele amapulani omsebenzi wesikhathi eside.
Ngesikhathi kwethulwa, uJagdeesh Rao, oyi-CEO ye-FES, uthe: "Ukusebenza ngezinkinga zasehlathini, zomhlaba kanye namanzi kudinga ukubukwa okuthuluzelayo, ngoba lezi zinsizakusebenza zidlulisa imingcele yabantu nokubuka kwendawo kusiza isu lokuthi ukugcinwa kwezinhlobo ezisengozini, ukongiwa kwemithombo efana namanzi ne-biomass kanye nokukhishwa kwezinsiza ngezidingo zabantu. Izithombe zesethelayithi zinikeza ukubuka okungcono kuneso lesinyoni. Imvamisa, kunamasethi wedatha amakhulu, ama-algorithms namathuluzi atholakala ezinhlanganweni ezahlukahlukene, kepha angefinyeleleki kochwepheshe nakubantu, ikakhulukazi ngendlela engafinyeleleki. Ngaleli hlelo, i-FES ayisizi kuphela abenzi bezinqubomgomo nabaphathi ekwenzeni izinqumo ezizwakalayo, kodwa futhi iqeqesha abantu emizaneni nasezindaweni ezikude ukuzakhela ikusasa eliqhakazile » .
“Kunesidingo sentuthuko esimeme futhiobumbano kanti nobuchwepheshe besimanje bungadlala indima enkulu kukho. Ukuthuthuka okungagcineki kusho izinto ezahlukahlukene kubantu abahlukene, kepha ngokubaluleke kakhulu, kuzama ukuvumelanisa izidingo ezahlukahlukene futhi kutholakale nezisombululo ezithile zesikhathi eside, ”kusho uToratorat phambilini, egcizelela ukuthi esimeni sokuqina, kubalulekile ukunanzelela ukuthi“ ngenkathi ukuthi imvelo yaphansi yabampofu incane, ukuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokulahleka kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo kuthinta abampofu kakhulu kunabacebile.
UBurmanje uthe: “Kunesidingo sokubambisana okubanzi emhlabeni wonke emkhakheni we-geospatial ukuze kukhuthazwe ukwenziwa kwezinto ezintsha, kugcizelele amandla. Iqembu lokwanda komuntu ngamunye likhiqiza umthelela omkhulu wolwazi lwe-geospatial. I-UNGGIM idlala indima enkulu kulokhu, ibona isidingo sedatha yendawo yokwenza izinqumo. Kubalulekile embonini yomphakathi ukuthi ichaze kabusha kule tsunami yedatha ».
I-FES isebenzela ukulondolozwa kwemvelo nemithombo yemvelo ngesenzo esihlanganyelwe semiphakathi yasendaweni. Umnyombo wemizamo ye-FES ilele ekutholeni amahlathi kanye neminye imithombo yemvelo ngaphakathi kwezomnotho, ezenhlalo kanye nezemvelo ezinamandla ezindaweni zasemakhaya. Kusukela ngoSepthemba 2019, i-FES ibisebenza nezikhungo zasemakhaya ezingama-21,964 ezifundeni ezingama-31 zezifunda eziyisishiyagalombili, isiza imiphakathi yasemakhaya ukuvikela amahektare ayizigidi eziyisi-6.5 womhlaba ovamile, kufaka phakathi udoti, umhlaba osehlathini oncolile kanye nomhlaba wasePanchayat wokulima , kube nomthelela omuhle kubantu abayizigidi eziyi-11.6. I-FES isekela ama-Panchayats namakomidi awo amancane, amakomidi amahlathi amadolobhana, amakomidi amahlathi we-gramya, izinhlangano zabasebenzisi bamanzi kanye namakomidi asezinhlwini ukuthuthukisa ukuphathwa kwemithombo yezemvelo. Kungakhathalekile ukuthi luhlobo luni lwesikhungo, le nhlangano ilwela ubulungu bayo yonke indawo nokufinyelela okulinganayo kwabesifazane nabampofu lapho kuthathwa izinqumo.
Nksk Debkanya Dhar Vyavaharkar
Thumela Previous«Langaphambilini I-AulaGEO, inkambo enhle kakhulu enikezwa ochwepheshe be-Geo-engineering
Post Next Yini okungafani - izinhlobo nezinhlelo zokusebenzaOkulandelayo »
I-Ansys Workbench 2020 Inkambo
U-Ansys Workbench 2020 R1 Uphinde futhi u-AulaGEO uletha isipho esisha sokuqeqeshwa ku-Ansys Workbench 2020 R1 ...
Izifundo zeHydrosanitary system zisebenzisa iRevit MEP
Funda ukusebenzisa i-REVIT MEP ekwakhiweni kokufakwa kwe-Sanitary. Uyemukelwa kulesi sifundo ekufakweni kweSanitary ngeRevit MEP ....
Isakhiwo Sokwakhiwa Kwezakhiwo sisebenzisa iSakhiwo seRotot AutoDesk
Umhlahlandlela ophelele wokusebenzisa ukuhlaziywa kweRobot Structural Analism, ukubalwa kanye nokuklanywa kokhonkolo kanye nezinsimbi zensimbi ...